“အတွေးစလေးတွေ”: ပါဝါ = လက်နက် ? ပညာ ?
Posted by Han Kyi at 8:14:00 am
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စိန်ဖြစ်နေဖို့ အရေးအကြီးဆုံးပါတဲ့..
စိန်ဖြစ်တဲ့ဘ၀မှာလည်း ရုရှားစိန်တွေ မဖြစ်ကြဖို့တော့ လိုသဗျား..
ဒါပေါ့ကိုရင်ရာ စိန်ဆိုမှစိန်ပေါ့ဗျာ...ဒေါင်ဒေါင်မြည် တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် စံမီစိန်တွေဖြစ်နေရင် ဘာကိုမှ မှုစရာမလိုဘူးပေါ့...
ဟုတ်တယ် ဦးဟန်ကြည်ရေ ... တစ်ကမ္ဘာလုံး ပညာခေတ်မှာ ကျနော်တို့ဆီက ပညာတတ်တွေ နေရာမရတဲ့ဘ၀က ရင်နာစရာပဲ ...
တစ်ကယ့်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ အကို....။
ဦးဟန်ကြည်ပေးတဲ့ ဥပမာပုံပြင်လေး သဘောကျတယ်။ ဟုတ်တယ် ကိုယ်က စိန်ဖြစ်နေဖို့ပဲ လိုတာပါ :D
ဆြာရေ ကျွန်တော်က စိန်နဲ့တော့ အသံထွက်တူ တယ်း) စိမ် စိမ်း) ပညာတတ်ဖြစ်ချင်မိတယ် ဗျာ အခုချိန်မှာ တစ်ကနေပြန်စစေဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း တစ်ကနေပြန်စချင်မိတယ်
ပညာရှင်တွေကို ဘယ်လိုခိုင်းရမလဲ ဆိုတာ တတ်တဲ့ ပညာတတ်ကတော့
ဟုတ်ပ ဆရာ။ ခုဖြစ်နေတာက ပညာသင်ယူစ လူငယ်တွေကအစ သူပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အရိုက်အခတ်တွေ့ကြောင့် ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့ ပညာပေါ်မှာ သံသယ ၀င်နေကြတာပါပဲ။
စိန်ကတော့ အာဖရိက စိန်ပါနော်
Education is the most powerful weapon ဆိုတာလေး သဘောကျသဗျာ။
'တိုင်းပြည်မှာ ပညာရှင်ကို ထိုက်သင့်တဲ့ တန်ဖိုးထားမှုမပေးနိုင်သေးတာ' ဒါကြောင့်လည်း
ပညာရှင်တွေရဲ့ အရာရောက်မှုအခန်းကဏ္ဍကတော့ မှိန်ဖျော့နေဆဲပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။
အဲဒီလိုပါပဲဦးဟန်ကြည် ပညာရှင်တွေကိုလည်းတန်ဖိုးမထားတတ်သေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း တခါတရံခံပြင်း တခါတရံဝမ်းနည်းရပါသည်
19 December 2011 at 11:53
ပညာကိုတော့ ရသမျှ အချိန်လေးမှာ ရသလောက်တော့ ယူခဲ့တာပ ဆရာဟန်ရေ
ကိုယ့်ပညာနဲ့ အသုံးချသည်ဖြစ်စေ မချသည်ဖြစ်စေ သင်ယူခွင့်ရချိန်မှာတော့ ရသလောက် ယူချင်ခဲ့မိတာပါဘဲ
ကိုယ်တိုင်က ပညာကို လိုလားသူမို့ ပစ္စည်းဥစ္စာကို မစုဆောင်းဘဲ ပညာတွေကိုဘဲ စုဆောင်းခဲ့မိတယ်. ခုချိန်မှာတော့ ဥစ္စာစုဆောင်းသူတွေကတော့ အဆင်တွေပြေလို့ပေါ့လေ
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘဝကို ကျေနပ်ပါတယ်။ ပညာဆိုတာ မခိုးနိုင်တဲ့ ရွှေအိုးတွေ မဟုတ်လားနော်.
ပညာရှိတွေကို နေရာပေးဖို့ ပညာရှိတွေက တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်သွားဖို့ အချိန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ ယုံကြည်မိတယ် ဆရာဟန်ရေ။ ဆရာပြောတဲ့ ဥပမာလေးကို သိပ်...သဘောကျနေမိပါရဲ့။ ကြီးပွားကြောင်းတရားလေးပါးထဲမှာ နောက်ဆုံးတစ်ပါးက "လူမိုက်ကို ခေါင်းဆောင်မတင်မိဖို့"ပါပဲ။ မတင်လည်း လက်နက်အားကိုးနဲ့ ဖြစ်နေကြတာတော့ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလည်းနော်။
ပုံပြင်လေးသဘောကျသလို Google ကရှာထားတဲ့ ပုံကိုလည်း သဘောကျလှတယ်ကိုဟန်ကြည်။ ကိုဟန်ကြည်ပြောတဲ့နေ့တစ်နေ့တော့ရောက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ တော်တော်ကို လုပ်ယူရဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကျရင် ကျွန်တော်တို့လို အပြင်မှာလုပ်နေရတဲ့လူတွေတော်တော်များများလည်း
ပြန်ဝင်လာကြမှာပါ။ အချိန်တော့ယူရဦးမယ်ထင်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်တော့ တော်တော်တိုးတက်စေချင်ပါ
တယ်။ နောက်ကျနေခဲ့ပြီကိုး။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးသလားတောင်မသိပါဘူး။ အခုလောလောဆယ်တော့ လုပ်ပေးနိုင်သလောက်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေရဲ့ အသိဥာဏ်ကို ရနိုင်သလောက် လိုက်ဖွင့်ကြည့်နေပါတယ်ဗျာ။ ကိုဟန်ကြည်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းတွေနဲ့တော့ ကျွန်တော်သွားတူနေမလားဘဲ။
25 December 2011 at 20:38
Post လေးကို သဘောကျလို့ သမီး. www.wytumyanmar.ning.com မှာ မျှဝေ လိုက်ပါတယ်....(ခွင့်ပြုမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်)
credit ပေးပြီးမှ မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ